MUQDISHO, Soomaaliya - Diyaarad siday Dhaqaatiir iyo deeq daawo ah, oo ka socda dowladda Jabuuti ayaa maanta soo gaarey Muqdisho, iyagoo qeyb ka ah gurmadka caalamka u fidinayo dadkii ku dhaawacmay weerarkii Zoobe.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Thaabit Cabdi Maxamed, ayaa xaqiijiyay in 27 dhaqtar iyo daawooyin kale duwan ay dowladda Jabuuti soo gaarsiisay Muqdisho. Wafdigan waxaa hogaaminaya Wasiirka caafimaadka dalka Jabuuti.
Dhaqaatiirtan ayaa waxay ku biiri doonaan gurmadka xoogga leh ee ka socda Muqdisho, gaar ahaan xaruumaha caafimaadka, kaasi oo lagu badbaadinayo nolosha dadka ku dhaawacmay qaraxa, oo lagu qiyaasay inay gaarayaan 430 qof.
Dowladda Jabuuti ayaa noqonaysa dalkii labaad oo is-garab-taagga Soomaaliya, oo ku jirta maalmo baroor-diiq ah, oo calankeedana hoos loo dhigay, kadib markii uu ka dhacay qarax geestay khasaaro lixaad ah, kaasi oo ay ku dhinteen 302 qof.
Diyaaradda Military oo uu soo diray Madaxweynaha Turkiga, ayaa saaka kusoo dagtay magaalada, taasi oo uu la socday Wasiirka caafimaadka dalkaasi iyo dhaqaatiir, iyadoo sidoo kale u keentay shacabka dhibaatada soo gaartey daawooyin.
In ka badan 30 qof oo dhaawacyo culus qaba ayaa loo duuliyay saaka magaalada Istanbul, ee dalka Turkiga.
Wafdi uu hogaaminayo Gudoomiyaha Baarlamaanka Jabuuti ayaa soo gaarey Muqdisho...
Wasiirka caafimaadka Turkiga oo soo gaarey Muqdisho
Soomaliya 16.10.2017. 10:02
ICRC oo xaqiisay in shaqaale looga afduubay Soomaaliya
Soomaliya 03.05.2018. 10:29
Soomaliya 04.12.2017. 13:40
Tirada dhimashada Qaraxii Zoobe oo korartay & dad la la'yahay
Soomaliya 20.10.2017. 23:42
Dalalka ku loolamaya marti gelinta wadahadalka DF iyo Somaliland
Soomaliya 04.03.2019. 07:02